Kyrgyzstan: Nilazana Mba Handray Aotobisy Ireo MPs (Mpikambana Amin’ny Parlemanta) · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Febroary 2012 1:01 GMT
Tsy dia malaza loatra amin'ny fitondrantena maneho fahaiza-mihafy ireo mpikambana ao amin'ny Parlemanta (MPs) avy amin'ny Jogorku Kenesh ao Kyrgyzstan. Kanefa, sosokevitra iray nivoaka avy tao amin'ny Tranoben'ireo mpanao lalàna ny amin'ny tokony handavan'ireo MPs ny fiara vatsian'ny fanjakàna nomena azy ireo ka handraisan'izy ireo kosa ny ‘minibus’ rehefa handeha hamonjy asa no nahatonga ireo Kyrgyz mpiondana aterineto hatrany amin'ny fanombantombanana ny tombontsoa tokony na tsy tokony homena ireo olomboafidiny.
Ilay sosokevitra dia niainga avy any amin'ny laharan'ny antoko sosialista Ata-Meken, ho tohin'ny kabary lavabe momba ny fomba hifehezana ny tetibolam-panjakana bokan-trosa nefa nabontsina be. Ny fanehoan-kevitr'ireo MPs avy amin'ny antoko hafa avy eo dia tena nohalalinina an-tsakany sy an-davany tokoa ao amin'ny Kloop.kg, lahatsoratra iray avy amin'ny Begimai Bolotbekova.
Akunaly Dosaly avy amin'ny Ata-Meken no nanasongadina [ru] ilay “tetika maimaika” toy izao :
Ao anaty vondrona tsirairay, afaka manana zo hanana fiara manokana ho azy, iray na roa, raha ny ankamaroan'ny MPs kosa handray ‘minibus’ iraisana. Afaka tonga vao maraina izy ireo dia aterina mody indray ny hariva.
Tahaka ny fandraisana andraikitra izay tsy hita ny maharatsy azy izy ity, indrindra fa ireo MPs avy amin'ny vondrona samihafa dia ho sarotsarotra ihany ny hanantenana azy ireo ho tafaray anaty fiara fitateram-bahoaka iray. Saingy na amin'io fomba io aza, betsaka ireo mpanao lalàna no tsy faly amin'ilay hevitra.
Jyldyzkan Joldosheva avy amin'ny antoko Ata-Jurt sdia niteny hoe [ru]:
Manana trano aho any Bishkek – Nandà efitrano iray aho [niantohan'ny fanjakàna]. Saingy ny fiara, tsy azoko lavina satria tsy haitraitra iny fa filàna
Avy amin'ny zava-nitranga, raha ny honohono aminà vavahadim-baovao iray [ru] no inoana, i Zholdosheva dia mankamamy ny “filàna” vatsian'ny fanjakàna.
Na misy aza MPs vitsivitsy manohana ny ilay vinavina hisianà fiara fitaterana ho an'ny parlemantera amin'ny maha-hevitra azy, ny sasany kosa nihevitra azy io ho tsy azo tanterahana. Tatiyana Levina avy amin'ny antoko Ar-Namys niteny fa izy dia tsy manohitra ny eritreritra fandraisana fiara fitaterana itambaram-be, saingy io dia atahorany hitondra fomba fijery ratsy any amin'ireo mpifidy :
Raha lavinareo ny fiara natao hiasàna, dia tokony ho lavinareo koa ny zavatra rehetra – ny karama, ny fanohanana… Izay izany, dia ho tahaka ny inona izany? Monina aminà faritra samihafa eto amin'ny tanàna ny tsirairay. Heveriko fa hanahirantsaina no fahitàn'ireo mpifidy antsika an'izany [raha toa isika mandeha aotobisy rehefa hiasa], satria ireo efa misotro ronono eto amintsika tsy afaka ny handeha maimaimpoana amin'ny aotobisy – tsy maintsy mandoa saran-dàlana ry zareo
Araka izany ny fahalalana fa ireo MPs dia mandeha maimaimpoana amin'ny aotobisy dia vao mainka hampivontirika ireo mpifidy miohatra amin'ny fahitana ireo olom-boafidiny mamonjy ny asa ao anaty fiara Toyota Camri natolotry ny governemanta? Hmmm…
Fiara raitra, baike
Mendrika homarihana fa tsy ny mpanao lalàana rehetra eto Kyrgyzstan no mitondra fiara Camri rehefa hamonjy asa. Ny sasany amin'izy ireo dia mandà ny fanomezana fa aleony mampiasa ny fiarany manintona ny maso, raha ny hafa indray mampifandimby ny an'ny tenany manokana sy ny fiaram-panjakàna.
Raha ny fahalinana nanaraka ny lahatsoratr'i Bolotbekova, Kloop.kg dia nanentana ireo andianà mpanao gazety tanora ao aminy (izay ambanin'ny 24 taona daholo) sy ny mpamaky azy ao amin'ny vavahadim-baovaony mba haka sary ireo solombavambahoaka eny an-dàlana hamonjy asa aman-draharaha. Ny results dia navoaka toy izao manaraka izao (ohatra):
Azamat Arapbaev, MP avy amin'ny vondrona Ata-Jurt, dia ao anaty fiara “Lexus LX570″, maodely 2008, mitondra ny laharana 0028 KG no mandeha mamonjy ny toeram-piasany.
Araka ny ambara [vaova amin'izao fotoana], ity karazana fiara ity dia misanda USD 87,000 raha miova tompo.
Mba hividianana io fiara io – sady tsy mihinana na inona na inona, no eny an-dalambe no monina – dia andaniana :
– karama ofisialinà MP iray : 4.5 hatramin'ny 6.5 taona
– ho an'ny sarambaben'ny mpiasa monina ao Bishkek: 22 hatramin'ny 33.5 taona
Ilay lahatsoratra, izay manasongadina dimiambinifolo mitovy amin'izay, dia niteraka onjam-panehoan-kevitra avy amin'ireo mpiondana aterineto, izay tamin'ny alalan'ny rindrambaiko kely ao amin'ny pejy Facebook-n'ny Kloop dia nisafidy ny hiaro MPs voafaritra ho toy ny “olo-mendrika” na mikisaka mankany amin'ny fanapahan-doha miaraka amin'ny fitarainana mikasika ny fandrrarirana sy ny tsy fitoviana.
Tynchtyk Maldybaev dia nampakatra tamim-panarabiana hoe :
Fa dia nahoana ianareo no [miteny] manaratsy ny solombavambahoakantsika e, andriamanitra amin'ny ampahany anie ireo e, ny olomboafidy Kyrgyz solontenan'Andriamanitra eto an-tany, tsy mihevitra afa-tsy ny vahoaka izy ireo.
Mpamaky iray hafa, Isken, no nitanisa Anglisy iray mpahay tantara, Lord Acton:
Satria fantatsika fa manimba saina ny fahefàna ary ny fahefàna tapitr'ohatra dia faran'izay tena manimba saina.
Saingy raha ny sasany amin'ny mpamaky variana mikajy ny fotoana mety ho laniny mba hahafany mividy Lexus iray, ny hafa kosa manoso-kevitra hoe ilay lahatsoratra dia nikendrena ny hanosehana ny vahoaka hankahala ireo mpitondra. -ho setrin'ireny fiampangana ireny, dia namaly i Anna Leilik , mpamoaka lahatsoratry ny Kloop hoe :
Tsy tanjonay mihitsy ny haneho izay mahatsara na maharatsy ireo MPs ireo. Inoana fa voamarikareo hoe tsy mitovy isa ny solombavambahoakantsika avy amin'ireo vondrona politika samihafa – natao antsapaka no nifidianana ireo fiara. Nitady izay hampitahana ny angona avy tamin'ireo loharano samihafa amin'ireo sary fotsiny izahay. Miaraka amin'ny fijerena ny [vidin'ny fiara] sy ny karama, azon'ny rehetra jerena ao anaty aterineto izany, ary ny zavatra tsy misy hafa amin'izany izay nataonay – nikajy – dia na iza na iza afaka manao izany avokoa.
Miainga amin'ny miaramila manokana ka hatramin'ny fitateram-bahoaka
Avahantsika ny toe-tsaina ara-moralin'ireo MPs tsy mahari-boa-kena, ny zava-misy amin'ny hoe ny parlemanta Kyrgyz dia miady hevitra amin-javatra tahaka izany dia manamarika fiovàna goavana hnanomboka tamin'ny Aprily tamin'ny taona lasa, rehefa nandray fitenenana ilay mpitondra tenin'ny antenimiera,Akhmatbek Keldibekov dia nanao tolo-dalàna izay manome alàlana ireo mpanao lalàna mba hanana mpiaro manokana mitam-piadiana ao anatiny sy eny ivelan'ny parlemanta.
Tamin'izany fotoana, fitsapan-kevitra iray nataon'ny Kloop no nampiseho fa ny ankamaroan'ireo mpampiasa ilay vavahadin-tseraserany no nanohitra ilay lalàna, raha maro koa ireo nanohana izany fotsiny noho ny antony manjavozavo sy mamitaka. Iray amin'ireo mpampiasa i Nurbek nanamarika hoe:
Izaho dia MANKASITRAKA io lalàna io. Avelao ry zalahy hifampitifitra ao Jogorku Kenesh
Mazava be, 12 volana latsaka aty aoriana, niova lasy tanteraka ny Mpanao lalàna. Manana fiaraha-mitantana vaovao, mpitondra teny vaovao, ary ireo mpikambana ao aminy dia mandinika ny hamadihana ny “flotte parlemantera” ho fitaterana iraisana. Any antsefantsefany any dia misy resaka hanaovana tafa mivantana amin'ny fahitalavitra miandry fotsiny izay higadonany.
N.B.: Toa kisendrasendra ihany, Akhmatbek Keldibekov dia nandao ny toeran'ny mpitondra teny tao anatinà savorovoro manodidina ny fitsinjarana ny laharam-pamantarana manokana ho an'ireo ‘KG’. Miainga amin'ny laharam-pamantarana ny an'ny fiadidiana ny fitondrana (KG 001) mankany amin'ireo laharana KG an-jatony tsy dia manao ahoana loatra, ireny zavatra ireny dia manome endrika tsanganana iray ao Kyrgyzstan ary mazàna no manme anao fahafahana miserana tsy amin'ahiahy an'ireo mpitandro filaminana mandrindra ny fifamoivoizana. Mbola mijanona ho ankamantatra ny hoe laharana toy inona no hipetaka amin'ireo “aotobisin-dry zareo”.
3 herinandro izayZeorzia